A-huset - Söderhamns kommun Gamla Webben
| Carruur & dhalinyaro
A-huset waxay isu keentaa dadka dhalinyarada ah ee magaalada degen marka ay ka soo baxaan dugsiga iyo maalmaha fasaxa ah. Waxaan bixinaa wax yaalo badan oo hawlo ah´waana lacag la'aan iyo dalabyo caawimaad si aad u hesho wadooyin kale oo xiiso leh waqtiyada aad firaaqada tahay. Waxaan sidoo kale oo aanka shaqeynaa la dagaalanka dhaqanka xun sida khamriga, daroogada IWM.
A-huset waxaan ku siin karaan:
Shineemo, jimicsiga, studio music, bilyaardi, kubadda miiska, ciyaarta xeegada barafka, kubbada cagta, basketball, kubbda koleyga , ciyaar kooxeed, (sida ciyaarta turubka, ciyaar wadajir ah) ciyaarta gammuunka, IWM.
Qolka lagu ciyaaro geemka.
Kombiyuutarada, Nintendo Wii U, Xbox One, Ps4, Kinect. Toddobaad kasta waxaala qabanqaabiyaa koobab kala duwan, baaritaanka filimka iyo wax ka badan.
Waxa kale oo aanu kuu diyaarinaa qalinjabinta (dhalin yarada iskuulka ka baxay), caweyska, bandhigyada toos ah , fanaaniinta,koob kubada cagta ah, koobabka waa cayaarta barafka, iwm. Haddii aad tahay inta u dhaxaysa 7 sano ilaa 18 sano, waxaad heli kaarka xubinnimada waana lacag la'aan.
Macluumaadka ku saabsan xadka da'da iyo saacadaha furitaanka halkan riix halkan.
Dad badan oo waaweyn ay hareerahaaga joogaan
Guryaha loogu talagalay dadka singalka ah
10 talooyin oo ku saabsan internetka
Xeerka Qaraaka caruurta (pdf)
Xuquuqda HVB-degaanka (pdf, 198 kB)